Ukunakekelwa kwe-Orchid - ngalezi zeluleko i-orchid yakho izokhula
Ama-Orchids Care - Indlela Yokukhulisa Ama-Orchids Awo | | Indlu yezitshalo
Ukukhula kwama-orchid kungakhuthazwa kanjani?
Amaphutha avamile kakhulu ukunakekelwa kwe-orchids
I-orchid noma i-Orchidaceae ibizwa ngokuthi ithandwa kakhulu futhi isakaze emhlabeni jikelele.
Ukunakekelwa okufanele kwe-orchids
Ama-orchids asele ngemuva komndeni wama-daisy, okuthiwa i-Asteraceae, iqembu lesibili elikhulu kunazo zonke ezinhlakeni zezitshalo ze-bedecktsamigen.
Ukunakekelwa okuhle kwe-orchids
Babhekwa njengenhle kakhulu. Ngenxa yalesi sizathu, i-orchid yindlovukazi phakathi kwezitshalo kubantu abaningi abathandi bezimbali.
Izinhlobonhlobo ze-orchid zinkulu. Ingqikithi kunezinhlobo ezivunyelwe ze-30.000. Umbhalo olandelayo uchaza amanye amathiphu namasu okunakekelwa nokuphathwa kahle kwama-orchids. Ibuye ixoxe ukuthi yimiphi ukunakekelwa kwe-orchid okwenza njalo.
Ngokuyinhloko, i-orchid kulula ukuyisebenzisa isitshalo esingafuni kakhulu.
Nokho, kunamaphutha ambalwa angenziwa ukunakekelwa kwe-orchid. Ukuze lokhu kungenzeki futhi ama-orchid azizwa kahle, umbhalo olandelayo unikeza ulwazi mayelana nokuthi ungakwenza kanjani kahle.
Ukukhula kwe-orchid kungakhuthazwa kahle ngezimiso zomhlahlandlela. Lokhu kuhlanganisa ukuthengwa kwebhodlela lokutshala elifanelekayo le-orchid. Lapha, usayizi webhodsi kubalulekile. Sicela uqiniseke ukuthi ibhodlela le-orchid yakho lilingana nesilinganiso esifanele esifanele esitshalweni.
Lokhu kusho ukuthi ibhodlela le-orchid akumele libe likhulu kakhulu. Isizinda salokhu ukuthi ibhodlela lokutshala le-orchid linikeza ukuzinza. Noma kunjalo, embizeni enkulu kakhulu le njongo ayikwazi ukugcwaliseka. Esimweni esibi kunazo zonke, i-orchid ayixhaswa ngokufanele ngenxa yembiza enkulu. Nokho, lokhu kuyadingeka ukuze imbali ikhule kahle. Kulesi simo, isikhala esiningi sisho ukukhula okungaphezulu, kodwa okuphambene nalokhu. Kulimaza isitshalo uma uthenga ummbila omkhulu kakhulu.
Ngokuvamile, leli phutha lenziwe futhi lilungiswe ukuthi isitshalo sisakhula futhi lokhu sekuvele kuhlinzekwe ekuqaleni. Noma kunjalo, lokhu kuzonikeza isitshalo sakho uhlaka olubalulekile lokukhula. I-orchid engatholi ukuzinza ebhodweni layo ngeke ikhule kahle. Ngakho-ke, sicela ufinyelele ebhodweni elincane. Ngaleso sikhathi kuphela izimpande ze-orchid zinethuba lokuzinamathisela kahle.
Ngaphezu kwalokho, izimbiza ezincane zifanelekile ngamanzi okuzothululwa. Ngalesi sikhathi, kufanele kuqashelwe ukuthi ama-orchid ayithandi amanzi amaningi. Ngakho-ke kungcono kakhulu embizeni encane lapho uhlwanyela khona i-orchid yakho futhi uhlale umanzi ngamanzi ambalwa. Ngakho-ke ungagcina izinkinga ezizohambisana nokumbiza okukhulu.
Isibonelo, enye yalezi zinkinga ukuthi uma inani lamanzi liphakeme, i-orchid ayikwazi ukuwuthola ngokuphelele amanzi. Amanzi agijimela kumlimi. Ngenxa yalokho, izimpande zezitshalo azikwazi ukuhlala zimanzi unomphela. Uma lesi simo singatholakali ngesikhathi, isitshalo sigula. Lokhu kubonakala eqinisweni lokuthi izimpande zibola. Lesi simo sibaluleke kakhulu kwi-orchid. Ngalesi sikhathi, akakwazi ukuzinikeza izakhi ezidingekayo. Uma lesi simo singabonakali, lesi sitshalo singafa. Lokhu kufanele kugwenywe ngazo zonke izindleko. Sicela njalo uqiniseke ukuthi awekho amanzi ebhodweni.
Lesi sitshalo sithululwa phezu kwamanzi amaningi kakhulu
Njengazo zonke ezinye izitshalo, ama-orchid adinga amanzi ukuze aphile. Kodwa-ke, ngoba ama-orchid anamacembe angakwazi ukuletha amanzi amaningi ngenxa yezindawo zawo eziqondile, isilinganiso esifanele sibalulekile.
Ngikhathalela kanjani ama-orchid ami kuya embali?
Ngemva kokuba izimpande zibuyiselwe ngokuphelele, amanzi asele kufanele asuswe. Uma kungenjalo, lesi sitshalo sisongelwa ukufa. Ngakho-ke, ingozi yokuthi isitshalo sithandwa kakhulu kakhulu kunengozi yesitshalo esomile. Ngenxa yezici zayo, i-orchid ingaphila kahle ngaphandle kwamanzi isikhathi eside. Ngakho-ke ukukhishwa kwesokudla kungenxa ye-alpha ne-omega yokunakekelwa kwe-orchid.
I-2) I-orchid ayiyona ilanga - ilanga eliqondile kakhulu
Ngokungafani nezinye izitshalo eziningi, i-orchid ithanda ilanga, kodwa kuphela ngokulinganisela. Ama-orchids asele kakhulu elangeni, azwele ngokuthola izindawo ezimnyama. Lokhu akubukeka kahle futhi isitshalo sizwa singakhululekile. Kulesi simo kufanele ufune indawo entsha, shadier for the flower. Ukukhanya okuningi kusiza i-orchid, kodwa akukho ilanga eliqondile.
3) Umoya omubi - hhayi ngaphezu kokushisa ebusika
Umoya ekamelweni akufanele kube omile kakhulu, ngoba lokhu akuthandi i-orchid noma. Ukhetha umoya ofudumayo nomswakama kunalokho. Ukukhiqiza umswakama, isibonelo, isitshalo singasiphathwa ngamanzi. Noma kunjalo, lokhu kuyisilinganiso esincane esifushane. Omunye uvame ukunikeza ukushisa esitshalweni ebusika ngokuyibeka phezu kwe-radiator. Kodwa nje leli moya elifudumele lilimaza i-orchid, ngoba linciphisa umswakama obudinga kakhulu.
I-4) Ukuqapha lapho ukusika - izimpande zendiza zibalulekile kuma-orchids
Enye incwadi yokukhathalela iphathelene nezimpande ezithinta embizeni. Lezi azihle ukubuka. Noma kunjalo, izimpande zangaphakathi zibalulekile kwi-orchid. Ziyizikhungo zesitshalo ngakho-ke zibhekene nokunikezwa kwezakhi. Kukhona okuhlukile: uma izimpande zibolile noma zifile zingase zisuswe.
I-5) Umthamo womanyolo ofanele
I-orchid inesidingo esincane sokudla okunomsoco. Isigaba sesitshalo sesitshalo sisukela ngo-Ephreli kuya kuSepthemba. Kuphela ngalesi sikhathi isitshalo kufanele sikhuliswe ngokuphindwe kabili ngenyanga. Emva kwalokho ukufaka umanyolo akusadingeki futhi ngakho-ke kufanele kukhishwe.
I-6) Ungashintshi izinga lokushisa kakhulu
I-orchid ithanda umkhuba. Lokhu kusebenza nokuphakama kwamazinga okushisa. Uma izinga lokushisa lishintsha ekamelweni lapho i-orchid ihlala khona, ayisekho kahle futhi eyeka izimbali. Ukuvimbela lokhu, kunakekelwa ukuthi ukushisa kwamakamelo cishe kufana nonyaka wonke.
I-orchids yekhasi lemibala
I-orchids yekhasi lemibala kubantu abadala